The SEO Iceberg: အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုကိုသက်ရောက်မှုရှိသောလျှို့ဝှက်အချက်များကိုရှာဖွေပါ Martech Zone
SEO Iceberg - အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုကိုသက်ရောက်စေသောလျှို့ဝှက်အချက်များကိုရှာဖွေပါ
သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 20, 2017 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 21, 2017 Douglas Karr
ဒီနေ့မှာအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုနက်နက်နဲနဲဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထူးခြားသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်း၏သိသာထင်ရှားသောရာခိုင်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သော ၀ င်ငွေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေနေသောကုမ္ပဏီများမှလာခြင်းဖြစ်သည် SEO ကျွမ်းကျင်မှုSEO ဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းသံသယရှိခဲ့သည်။ အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေခြင်း၏စွမ်းအားကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဖောက်သည်များအခွင့်အာဏာကိုမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံသို့ ဦး တည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂိမ်းကစားနည်းများကိုကြိုးစားခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ပြီးကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသောဖောက်သည်များ၏ပရိသတ်များနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်ထူးခြားသည့်အကြောင်းအရာများကိုနက်နက်နဲနဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ်တွင်သာအားစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ကျနော်တို့အာရုံစိုက်ကြပါဘူး ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကျနော်တို့အာရုံစိုက် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏အသုံးပြုသူများ။ သင်သည်သင်၏ကုမ္မဏီမှခိုးယူခြင်းကိုခိုးယူပြီးချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများ (SERPs) ၏ထိပ်ဆုံးသို့တွန်းပို့နိုင်သည်။ သို့သော်မည်သို့ဆိုမည်နည်း။ အကယ်၍ အကြောင်းအရာသည်ထူးခြားမှုမရှိပါကထို visit ည့်သည်အားသင်၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ဆင်းသက်ရန်နှင့်သင်နှင့်ဆက်ဆံရန်ခေါ်ဆောင်သွားတော့မည်မဟုတ်ပါ။
algorithm အပြောင်းအလဲများနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုဖော်ပြခြင်းမ။ သငျသညျအဖြူရောင် ဦး ထုပ်မဟာဗျူဟာများ (Search Engines ၏ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်မပေးသောနည်းဗျူဟာများ) ကိုကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နေကောင်းရှာဖွေလိမ့်မည်။ သို့သော် အကယ်၍ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် algorithms ကိုပြောင်းလိုက်လျှင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ကောင်းသော SEO ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူအပြုအမူနှင့်အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအာရုံစိုက်သည်။ သို့သော်သင်လုပ်ခဲ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနည်းငယ်ဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်။
ဤအ infographic ပြtheနာအတော်လေးနည်းနည်းဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်သင်လျင်မြန်စွာဖော်ထုတ်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အချက်များအားလုံးမဟုတ်ရုံသာမကစီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောအချက်များတိုးပွားလာနေသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization.
၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံး၏အောင်မြင်မှုအတွက် Search Engine Optimization ဟုလူသိများသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်သင်၏ site အတွက်ခိုင်မာသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသေချာစေရန်။ အလွန်ကြီးသောထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချခြင်းနှင့်မည်သူကမှရှာမတွေ့ပါကဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများဖန်တီးရာတွင်မည်သည့်အချက်သည်အဓိကဖြစ်သနည်း။ အသုံးပြုသူများသည်ရှာဖွေမှု ပြုလုပ်၍ အကြောင်းအရာများကိုတုန့်ပြန်သောနည်းများကိုပြောင်းလဲသောအခါ SEO သည်ရှုပ်ထွေးသောရှုထောင့်များစွာနှင့်လည်းပေါင်းစပ်လိုက်သောကြောင့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အနီရောင်ပူ Penny
နေသည်ဂူဂဲလ်၏ကိုယ်စားပြုပြီးရောင်ခြည်များကိုထုတ်လွှတ်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနောက်ဆုံးသတင်းများရှာဖွေပါ ရေခဲတောင်၏ရှုခင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နေသောသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ရှုထောင့်များကိုထိခိုက်စေသည်။
ကုမ္ပဏီများ လှေအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်, ရေခဲတောင်သွားလာရမယ်ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်သာသာမြင်နိုင်သည်။
မျက်နှာပြင်အောက်မှာအခြားရှိပါတယ် အချက်များ စဉ်းစားပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောရလဒ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ငါမင်းကိုပြောသင့်တယ် စွန့်ပစ် SEO လား လုံးဝမဟုတ်ပါ၊ သင်၏အရင်းအမြစ်များကို၎င်းတို့ကိုအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မည့်နေရာတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်၊ SEO အတိုင်ပင်ခံ ဂူးဂဲလ်၏အလဂိုရီဇင်ကိုနားလည်ရန်ဟန်ဆောင်ပြီးသင်၏ပရိသတ်ကို၊ သူတို့၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအားပေးသည့် omni-channel မဟာဗျူဟာများကိုအစဉ်နားလည်ခြင်းမရှိဘဲသင့်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်အာမခံသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူအချက်များကိုသွားလာရန်အလုပ်လုပ်သည်။ စာမျက်နှာအမြန်နှုန်း၊ ကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် site အဆင့်ဆင့်၊ သော့ချက်စာတမ်းသုတေသနနှင့်မိုဘိုင်းတုန့်ပြန်မှုတို့ကဲ့သို့အရေးကြီးသောအချက်များသည် SEO မဟာဗျူဟာတိုင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသောအခြားအချက်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုများကိုပျက်ပြားစေမည့်အစားကျွန်ုပ်တို့သည်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အခွင့်အာဏာ၊ ယုံကြည်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်သည်။ ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြင့်ထိုအကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများသည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သည်။ ၏ချွင်းချက်
ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်သန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့၏ရှာဖွေရေးနှင့်ပါဝင်သည့်မဟာဗျူဟာများကိုသုံးစွဲသောကြေညာသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ အောက်ပါအချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်မည်သည့်စီးပွားဖြစ် SEO platform ထက် ကျော်လွန်၍ ရှုပ်ထွေးသောဒေတာသိုလှောင်ရုံကြီးများကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ပြီးပြီ။ အခွင့်အလမ်းကသော်လည်းသင်၏ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါ!
24:2017 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 25
ကြီးမြတ်အချက်များနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါး။ စာမျက်နှာ ၁ အဆင့်ကိုကတိပေးသောအတိုင်ပင်ခံများကိုသံသယ ၀ င်ရန်လူများအားကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအကြံပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်စပမ်းနည်းဗျူဟာများ (သို့) အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများကိုအဆုံးအသုံးပြုရန်တကယ့်တန်ဖိုးကိုမပေးနိုင်သည့်အနက်ရောင် - ဦး ထုပ်နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။